Ady amin'ny coronavirus :: Hiara-hiasa momba ny tambavy CVO ny OMS sy i Madagasikara • AoRaha
Ady amin’ny coronavirus Hiara-hiasa momba ny tambavy CVO ny OMS sy i Madagasikara
Mivoatra ny fomba fijerin’ny vondrona iraisampirenena misahana ny fahasalamana (OMS) manoloana ny famokaran’i Madagasikara ny tambavy Covid-organics na CVO, izay ampiasaina amin’ny fisorohana sy fitsaboana ny valanaretina coronavirus eto amintsika sy amin’ny firenena sasany aty Afrika. Nandritra ny resadresaka ampitain-davitra (visioconférence) nifanaovan’ny Filoha malagasy, Rajoelina Andry, sy ny Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, tale jeneralin’ny OMS, afak’omaly, no nanehoan’ity farany ny fanohanany an’i Madagasikara amin’ny fampiasana an’io tambavy CVO io.
« Hanampy sy ho mpiaramiombon’antoka amin’i Madagasikara eo amin’ny fanaovana andrana sy fanatsarana an’ity tambavy ity ny OMS. Ny vondrona misahana ny fitsaboana nenti-paharazana eo anivon’ny OMS no hanaraka an’i Madagasikara amin’ireo dingana rehetra ho fanatanterahana ny tetikasa », hoy ny tale jeneralin’ny OMS.
Nandroso hevitra ny amin’ny firosoana amin’ny fanaovana andrana arapitsaboana ny tambavy CVO sy ireo singa miaraka aminy, araka ny fenitry ny OMS ao anatin’ny tetikasa antsoina hoe « Solidarity Trial », kosa ny Filoha Rajoelina Andry. « Angatahinay anefa ny hanaovana sonia ny fifanarahampitokisana amin’ny OMS mba hitandrovana ny tsiambaratelon’ireo singa rehetra nanamboarana ny Covid-Organics », hoy hatrany ny Filoha malagasy.
Tsy nandà an’io fangatahana io ny tale jeneralin’ny OMS satria azo tanterahina tsy ho ela, hoy izy, izany fifaraham-pitokisana izany. Fantatra fa an-dalan’ny famitana ny dingana fahatelo hamadihana ny tambavy Covidorganics ho ranom-panafody azo atsindrona ireo mpikaroka malagasy, ankehitriny.
Misy hatrany kosa ireo firenena mangataka an’ity tambavy ity, toa an’i Tchad sy Haïti, tamin’ny herinandro lasa iny.
Antanambao Antsirabe II :: Fatin-dehilahy nihantona tao amina trano vao atsangana